သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်, မန္တလေး. သွားဘက်‌ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသ
ⓘ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်, မန္တလေး. သွားဘက်‌ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သွား ..
ⓘ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)
သွားဘက်‌ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်မန္တ​လေး မှ ပေးအပ်သော ဘွဲ့များမှာ သွားဖက်ဆိုင်ရာဆေးပညာဘွဲ့ B.D.Sနှင့် မဟာဘွဲ့ M.D.Sc များဖြစ်ပြီး ဒီပလိုမာအနေဖြင့် သွားဖက်ဆိုင်ရာဆေးပညာဒီပလိုမာ Dip.D.Sc တို့ဖြစ်ကြသည်။ 180px
Wikipedia: သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)